[OFFICIAL] dr.fone yamathuluzi - iPhone Data Recovery 
dr.fone yamathuluzi - iPhone Data Recovery
isofthiwe emhlabeni 1st iPhone alulame idatha.
Aphakeme kakhulu iPhone idatha yokutakula izinga embonini.
Phinda idatha kusuka iPhone, i-iTunes futhi iCloud.
Phinda izithombe, amavidiyo, oxhumana nabo, imiyalezo, amanothi, shayela izingodo, kanye nokunye.
Ihambisana nawo iPhone zakamuva 7 Plus, i-iPhone 7.
idatha Lost elahlekile. Asikwazi alulame amafayela kusuka zimo eziningi ezifanayo abazithandayo.
idatha Lost emva kabusha kwasefekthri
idatha Lost ngenxa isibuyekezo se-iOS
Ungasebenzisa le-iOS alulame idatha ukuskena yonke idatha isusiwe noma ilahleke-iPhone, iPad noma iPod touch yakho, bese kuqala imininingwane mahhala.
Ufuna ukulanda futhi kukhishwe ifayela iCloud isipele? Le software iOS alulame idatha kukuvumela ukukwenza mahhala. Izame futhi niyolazi ke.
Sonke siyazi ukuthi Apple ayivumeli abantu ukuthi ifunde okuqukethwe wefayela iTunes isipele, kuyilapho le software iOS alulame idatha enza, futhi mahhala.
Kuyinto esingaphezu iOS ithuluzi alulame idatha. Uma uthola idatha yakho Chile scan, ungakwazi ngqo kuqala futhi uzitholele okuqukethwe uma une nesidingo esingaka. Kuyinto umsebenzi kokuchofoza okukodwa.
Le software iOS alulame idatha ikuvumela ukuba alulame idatha efana noxhumana nabo, imibiko, izithombe, amanothi, shayela umlando, izikhumbuzo, Imiyalezo Whatsapp, nokuningi, kuze izinhlobo zamafayela 18.
Le software iOS alulame idatha kuyinto isofthiwe ukufunda kuphela ngokuphelele. Ngeke ugcine, shintsha noma avuze noma iyiphi idatha kudivayisi yakho noma ifayela yokusekelayo. Sithatha idatha yakho siqu futhi akhawunti sina. Uneminyaka njalo kuphela umuntu ongakwazi ukuyifinyelela.
Qedela iOS Oluvumelana
3 Data Recovery Izindlela
Ngqo scan efonini yakho ukuze alulame idatha asusiwe
Khiphela isipele yakho ye-iTunes futhi alulame amafayela akhethiwe
Khiphela iCloud zakho zokulondoloza kanye alulame amafayela akhethiwe
Enembile, ephephile, futhi enokwethenjelwa.
Zama mahhala izinsuku ezingu-30!
Phinda yonke idatha, noma khetha amafayela
Kuphela ongakwazi ukufinyelela i-akhawunti yakho
3 izinyathelo ezilula: ukuxhuma, ukuskena futhi alulame
Indlela Phinda Call Umlando ku-iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Kufaka)
Indlela Phinda wezithombe ezisusiwe kusuka ku-iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Kufaka)
Indlela Phinda Ividiyo isusiwe ku-iPhone 7 (Plus) / 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
Indlela Buyisa WhatsApp Imilayezo ku-iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Indlela Phinda Isuse iPhone Oxhumana Ngaphandle Backup
Indlela Phinda iMessages kusuka iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Kufaka)